Pacific-AA Online Shop | Register
Click Confirm to get an SMS confirmation code.
Need Help to login? Please contact or chat with us. Hotline : ‎09762244441, ‎09762255551
လက်ရှိမှာတော့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းကိုသာ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကျန်သောမြို့နယ်များနှင့် နယ်မြို့များအတွက် ပို့ဆောင်နိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။
လူကြီးမင်းအတွက် အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများကို ကျွန်တော်တို့၏ Pacific-AA Online Shop မှ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်
လူကြီးမင်း၏ အချက်အလက်များအား ဖြည့်စွက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( Register ) ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်
ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများကို လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ခြင်း
စိတ်ချရသော ငွေပေးချေမှုစနစ်များဖြစ်သော Cash On Delivery ( ပစ္စည်းရောက်ငွေချေစနစ် ) ၊ MPU စသည့်ကဒ်များဖြင့်အွန်လိုင်းမှ တဆင့်ငွေပေးချေခြင်းကို အသုံးပြု၍ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း
မိမိ မှာယူထားသော ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများကို မိမိအကောင့်ထဲတွင် လွယ်ကူစွာ ပြန်လည် စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း
Delivery ဝန်ဆောင်မှုရှိသည့်အတွက် အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း
ပစ္စည်းလက်ခံရရှိသည့်အချိန်တွင် မျက်မြင်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ပါတယ်
ဖြည့်စွက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( Register ) ပြုလုပ်ခြင်း အတွက် အခက်အခဲတစုံတရာရှိပါက
ဖုန်းနံပါတ် 09 762 244441 (သို့) 09 762 255551
အီးမေးလ် contact@pacific-aa.com ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်